Vaovao - Fa maninona no miatrika ambany ny efijery raha eo amin'ny latabatra ny telefaona finday? Tsy resaka fiainana manokana ihany
Fanoloana efijery oled mafy ho an'ny iPhone XS MAX
Incell lcd fanoloana ny iPhone 11
Incell lcd fanoloana ny iPhone 11 pro
Incell lcd fanoloana ny iPhone 11 Pro Max
Incell lcd fanoloana ny iPhone XR
Fanoloana efijery LCD ho an'ny iPhone 6G
Fanoloana efijery LCD ho an'ny iPhone 6P
Fanoloana efijery LCD ho an'ny iPhone 6S
Fanoloana efijery LCD ho an'ny iPhone 6SP
Fanoloana efijery LCD ho an'ny iPhone 7G
Fanoloana efijery LCD ho an'ny iPhone 7P
Fanoloana efijery LCD ho an'ny iPhone 8G
Fanoloana efijery LCD ho an'ny iPhone 8P
Fa maninona no mihetsika ambany ny efijery raha eo amin'ny latabatra ny telefaona finday? Tsy resaka fiainana manokana ihany
Mamelà ahy hametraka fanontaniana aminao aloha
Matetika apetraka eo ambony latabatra ny telefaona finday rehefa tsy ampiasaina,
Mametraka ny écran ve ianao sa midina ny écran?
Fa fantatrao ve?
Apetraho eo amin'ny birao ny telefaona finday miaraka amin'ny écran.
Ho fantatrao ny antony aorian'ny famakianao ity manaraka ity?
Tombony telo an'ny efijery miatrika ambany
Sakano ny vovoka, efijery fifandraisana misy rano
1. Raha apetraka ambony ny efijery dia hisy vovoka betsaka, izay hahatonga ny efijery ho maloto. Ny rindrin'ny telefaona finday sy ny sarimihetsika henjana dia mety ho voarangotra mandritra ny fanadiovana.
2. Miatrika ny efijery finday, rano, lasopy zava-pisotro sns tsy voafafa tampoka teo amin'ny efijery finday izay antsoina hoe manindrona ny fo.
Noho izany, rehefa tsy ampiasaina ny telefaona finday dia midina ny efijery izay afaka misoroka ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny olombelona amin'ny lafiny iray.
Sakano ny fakantsary miakatra tsy ho voarangotra
Rehefa apetraka eo aloha ny efijery finday dia eo akaikin'ny birao ilay fakan-tsary convex, izay mora ny manenjika sy manolana ny fakantsary, izay hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny sary.
Fiarovana ny fiainanao manokana
Apetraka ambony ambony ilay finday. Raha sendra manodidina anao ny olona iray dia mety ho hitan'ny hafa ny antso an-tariby na ny hafatrao. Raha tena manokana ny vaovao dia mahamenatra. Ho fanampin'ny fampahalalana, raha tsy nakatona ny Alipay sy ny banky APP, dia mety hipoitra izy ireo noho ny fametrahana tsara ny efijery.
Mazava ho azy, rehefa tsy ampiasaina ny telefaona,
Miaraka amin'ny efijery ambany, misy zavatra maro hafa koa
Ohatra, tsy misy mailaka hafatra eo amin'ny efijery finday,
Afaka mifantoka bebe kokoa amin'ny fianarako sy ny asako aho.
Ho fanampin'izay, raha ny paosin'ny telefaona handinihana: asaina apetraka eo akaikin'ny tongony ny efijery, izay azo atao mba tsy ho voakasiky ny vy ivelany sy ny zoron'ny latabatra, ary afaka misoroka tsara ny mety hisian'ny ratra amin'ny tongotra vokatry ny hafanana. bateria amin'ny fahavaratra.
Rehefa avy mamaky dia azonao ve?
Ahoana ny fametrahana ny findainao?
Fotoam-pahefana: Aog. 18-2020
Vokatra mafana, Sitemap, AMP Mobile